အင်တာဗျူး နှင့် အဘ ( FR ) ( ပထွေး ရင်ခွင်မှာပဲ ခိုလှုံလိုက်ရတာပေါ့ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အင်တာဗျူး နှင့် အဘ ( FR ) ( ပထွေး ရင်ခွင်မှာပဲ ခိုလှုံလိုက်ရတာပေါ့ )
အင်တာဗျူး နှင့် အဘ ( FR ) ( ပထွေး ရင်ခွင်မှာပဲ ခိုလှုံလိုက်ရတာပေါ့ )
Posted by Foreign Resident on Oct 21, 2011 in Creative Writing | 15 comments
အဘ ( FR )
ဆရာ Kai ရဲ့
” အင်ကြင်းခိုင် “
ဝင် Comment ပေးတာ ။
Post ကြီးဖြစ်ရပြန်ပေါ့ ။
အဲဒီ ” အင်ကြင်းခိုင် ” Post နှင့်
သတ်ချင်တော့ မှာပဲ ။
အဘကိုသာ MG ကသာ
သူကလေး ထက်သာအောင် ဖြေပြလိုက်ဦးမှာ ။
” မော်တော်ကားဆိုရင် ရိုးရွိုက်စ်
ဒါမှမဟုတ် ဟမ်းမား မှစီးချင်တာ “
ဘာလုပ်မလဲ မာစီးဒီး ဘီအမ်ဒဗလျူ
နောက်တာပါကွယ် စိတ်မရှိကြပါနှင့် ၊
အကုန်လုံးကို သဘောကျ ပြီသား ၊
အကုန်လုံးကို ခွင့်လွှတ် ပြီသား ။
နဲနဲလေးမှကို အပြစ်မမြင်တတ်တာ ၊
အကောင်းမြင်သမားကြီး ဘဘ ပေါ့လေ ။
” အမေရိကန်တွေ ကမ္ဘာမှာ သင်္ချာအရမ်းညံ့တယ် ”
ဆိုတဲ့ အဆို မှန်နေပြီပေါ့ ။
ကမ္ဘာကြီး တခုလုံးကို ဘာပညာနှင့်များ
မှောက်လိုမှောက် သွန်လိုသွန် အုပ်စိုးနေပါလိမ့် ။
နိုင်ငံရေး စနစ်လေး တစ်ခု မှန်သွားပြန်တော့လဲ ။
ကမ္ဘာ့ ရှိရှိသမျှ အတော်ဆုံးဆိုတဲ့ ပညာတတ်တွေ
သူဌေးတွေကလဲ USA ပဲသွားချင်နေတာကိုး ။
အဲဒီတော့ ကိုယ်တွေ တိုင်းပြည်ထဲမလဲ
သူ့ ရွေးကျ တွေချည်း ကျန်ရစ်တာကိုး ။
အဲဒီတော့ မစခင် ကတည်းက ရှုံးနေတာလေ ။
အဖြေက ရှင်းနေတာပဲဟာ ။
ဝမ်းနည်းပြီး မျက်ရည်ကျတယ်တဲ့ ။
သူ့ Australia တိုင်းသူပြည်သားတွေကို ၊
USA ထက်သာအောင် လိုလေသေးမရှိထားပေမယ့် ၊
အတော်ဆုံးဆိုတဲ့ Australia ပညာတတ်တွေက
USA ပဲသွားနေနေလို့တဲ့ ။
ငါတို့ မြန်မာပြည်က ချုပ်ချုပ်ကြီးတွေနှင့်များ
ကြိုးစား ပမ်းစားကို မနည်း နှင်ထုတ်နေရတာ ။
ကိုယ်ဆွေမျိုးညာတိ နှင့် မွေးရပ်မြေကို
ပညာတတ် နှိမ်နင်းရေး Policy အောင်မြင်ရအောင် ဆိုပြီး ။
ဝိုင်းပြီး ပညာပြ နည်းမျိုးစုံ ဥပဒေမျိုးစုံနှင့်
ဆက်လက်ပြီး နှိပ်စက်ပေးလိုက်တာ ။
အဲဒီ ပညာတတ်လေးတွေ ခမြာ
( တချို့ဆို စိတ်နာစွာ နှင့်ပဲ )
ပထွေး ရင်ခွင်မှာပဲ ခိုလှုံလိုက်ရတာပေါ့ ။
ဇတ်သိမ်းတော့ ဘာဖြစ်လဲ ။
ပညာတတ်လေး ခမြာမှာ တော့ ၊
မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် ခေါင်းပါးတဲ့ ၊
နိုင်ငံ နှင့် လူမျိုး အပေါ် သစ္စာ မထားနိုင်တဲ့ ၊
အမေကျော် ဒွေးတော်လွမ်းသူကြီး ကိုဖြစ်လို့ ။
အမိ နိုင်ငံတော် ခမြာမှာ လည်း ၊
သူ တယုတယ ကျွေးမွေး ပြုစုလာခဲ့တဲ့ ၊
သူ့ရဲ့ အတော်ဆုံး အထူးချွန်ဆုံး ပညာအတတ်ဆုံး ၊
အားအကိုးသင့်ဆုံး အမျှော်လင့်ဆုံး ၊
( အချစ်ရဆုံး လည်းဖြစ်ဖို့များတဲ့ )
သားကောင်း သမီးကောင်း လေးတွေကို ၊
အစုလိုက် အပြုံလိုက် စွန့်လွှတ်ရ ။
( စကားသာပြောနိုင်ရင် သူလည်း
ငိုကြွေးလို့ကို ဆုံးမှာ မဟုတ်ဘူး )
ပထွေးနိုင်ငံ ( နိုင်ငံခြား ) ကတော့ ၊
သူ့ကို အခွန်တွေ နင့်နေအောင် ဆောင်ပေးမယ့် ၊
ခူးပြီး ခတ်ပြီသား ပညာတတ်လေးတွေ ရ ။
Australia Fellow ဆရာဝန် တစ်ဦး ( တစ်ဦး ) ကို
အခွန်ဒေါ်လာ တစ်သိန်း နီးပါး နှစ်စဉ် ၊
မြန်မာငွေ နှင့်ဆို သိန်း ရှစ်ရာကျော်
ဝင်ငွေခွန်ချည်းပဲ နှစ်စဉ် ဆောင်ရတယ်ဗျ ။
ဒေါ်လာ တစ်သန်း ဖြစ်နေပြီ ။
တခြား အခွန်တွေ မပါသေးဘူး ။
အခွန် ဘောက်ချာတွေတောင် ပြလို့ရသေး ။
တကယ်က စနစ်သာ ကောင်းရင် မှန်ရင်
ဒါတွေက အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး ရရမှာဗျ ။
အခုမှတော့ ပြန်ပြင်လို့ မရတော့ဘူး ။
လွန်တဲ့ဟာတွေလည်း လွန်ကုန်ပြီ ။
စိတ်နာတဲ့သူတွေကလဲ စိတ်နာသွားပြီ ။
မြန်မာပြည်ကို ဒီတသက် မပြန်တော့ဖူး
ပြောတဲ့သူတွေတောင် ရှိပါ့ ။
ဘဘ ချုပ်ချုပ်ကြီးတွေ ကတော့
နောက်ထပ် နှစ်တရာ လာထားပဲ ။
အဲဒီလို အထက်က Policy ချထားတာတွေ ၊
အောက်က လုပ်ဆောင်နေတာတွေကို ၊
မသိရတဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေကများ ၊
မျှော်လင့် နေကြသေးတယ် ။
ဒီလို Policy ဒီလို Idea မျိုးနှင့်ကတော့
ဟို ကျော်ဟိန်း ရုပ်ရှင်ထဲကလို
ဆယ်နှစ် ဆယ်နှစ် ( ဆက်စောင့် ) မဟုတ်ဘူး ။
ဆယ်သက် ဆယ်သက် ( ဆက်စောင့် ) လို့ပဲ
ဇါတ်နာစရာတွေ ဆက်ပြောမိရင် ၊
စိတ်နာလာပြီး ကိုယ်ပါ နိုင်ငံခြားသား ခံမိတော့မယ် ။
ကံစွပ် ပြီး ၊
ပြည်သူ ချစ်တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ၊
ပြည်သူ့အစိုးရများ တက်လာခဲ့ရင်တော့ ၊
ကိုယ့် လုပ်အားခကရတဲ့ ၊
ဖြူစင်တဲ့ အခွန်ငွေလေးတွေ နှင့် ၊
ကျေကျေနပ်နပ် ကြီး ၊
ပြန် တာဝန်ထမ်းချင်ပါဘိ ။
ရွာသူား တွေကတော့ နောက်ဆို
အဘ ကို Comment တောင်ပေးရေးပါတော့မလားပဲ ။
Post တစ်ခု ဖြစ်သွားလိုက်နှင့် ။
မျက်စိကိုနောက် နေတော့မှာဘဲ ။
ခွေးလွှတ် ကြပါ ။
အဝေးကနေ ရေးခွင့်ရနေတဲ့သူတွေ များများလေးရေးပေးကြပါ။
ခက်နေတာက ပြည်သူအများစုက အင်တာနက်မကြည့်နိုင်လေတော့
လူနဲစုလေးပဲ ဒီလိုအသိအမြင်တွေကို သိခွင့်ရနေကြတာ။
လူလတ်တန်းစား ရဲ့ ၃ပုံ၁ပုံလောက်က ဒီဗွီဘီကြောင်း အသိအမြင်နဲနဲကျယ်လာကြပေမဲ့
အခုတော့ ၈ ပေစလောင်းတွေနေရာမှာစကိုင်းနက်တွေ တဖြည်းဖြည်းနေရာယူလာနေပြီ။ နောင်ဆိုရင် ၈ ပေတွေတဖြည်းဖြည်းပျောက်
ပြည်တွင်းကနေ မှိုတက်နေတဲ့ ဦးဏှောက်တွေကနေ ထွက်ကျလာတဲ့ သဘောတရားတွေကို ဘယ်လိုမှ သဘောမထားပါနဲ့လို့ တောင်းပန်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် တစ်ခါက FR ကို ရေးမိတာ မှတ်မိဦးမလား မသိဘူး။ မြန်မာပြည်ကနေ ဂုဏ်ယူစရာကို ပြပါဆိုရင် FR ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ပါလို့။ မြန်မာတစ်ယောက်အနေနဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ တင့်တင့်တယ်တယ် ထယ်ထယ်ဝါ၀ါ နေနိုင်တာ မြန်မာပြည်အတွက်၊ ပြည်တွင်းကလူတွေ အတွက် ဂုဏ်ယူစရာလို့ ထင်ပါတယ်။ ပြောရရင် မြန်မာတွေ မညံ့ဘူးပေ့ါ။
“ကိုယ့် လုပ်အားခကရတဲ့ ၊
ပြန် တာဝန်ထမ်းချင်ပါဘိ ။”
FR တို့ အသက်လောက်ကပြန်လာချင်တာတောင် နောက်generation ကလေးတွေက ဖုံထူခြင်ကိုက်မီးပျက်တဲ့ ဒီပြည်မှာမနေပါရစေနဲ့လို့ပြောလာရင် ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ။
သူတို့လေးတွေ ဟိုမှာနေမပျော်ခင် မြန်မြန်ပြန်နိုင်မှ ပြန်ရောက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးအတွက် သားကောင်းရဒနာ လေးတွေ မွေးထုတ်ပေးနေတဲ့…
ချုပ်ချုပ်ဂျီးဒွေရဲ့ စေဒနာ ဗလဘွ တွေပါ အန်ကယ်ဖော ရယ် …
(အဲ့လူဂျီးဒွေ အကြောင်း ပြောရင် အော်ဂလီဆန်ပီး အရင်နေရာဂျီးက အောင့်အောင့် လာလို့ အဘလို့ မခေါ်ဘဲ အန်ကယ်ဖော လို့ ပြောင်းခေါ်လိုက်ပါသီ …)
ပြောရရင်ပို့စ်တစ်ပုဒ်နဲ့လည်းမလောက်ပါဘူး ဦးဦး FR ရယ်..
မိုးစက်ရဲ့ ဘကြီးတစ်ယောက်ဆိုရင် ၀န်ကြီးဌာနတစ်ခုမှာ ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်ကာနီးမှ သူများနိုင်ငံသားခံယူလိုက်တဲ့သားနဲ့သမီးကြောင့် အလုပ်ကထွက်ပြီး
စိတ်နာနာနဲ့ ချစ်နေမိဒယ် =))
သမဒဂျီးဦးသိန်းစိန်က အရင်အစိုးရလက်ထက် ဝံဂျီးခြုပ်ဘဝမှာ ပြောဖူးပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်အကိုင်တွေပေါလွန်းလို့ တိုင်းပြည်ချစ်ရင် ပြန်လာကြပါတဲ့၊ တောရွာတွေမှာ မစိုက်မပျိုးရသေးတဲ့ လယ်မြေတွေ ဖော်ထုတ်ပေးပါမယ်တဲ့။ ဩဇီဦးဖောတို့လို ကိုယ်ပိုင်တနိုင်စီးပွားရေးလုပ်ချင်ရင်လည်း လယ်လုပ်ခွင့်ပေးပါမယ်၊ ဆရာဝန်ဆိုရင်လည်း တောရွာတွေမှာ စိတ်ကြိုက်ကုသခွင့်ပေးပါမယ်တဲ့။ စိန်လား..
ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း နဲ့ 
အဘ တို့ မျှော်လင့်တဲ့ အနေအထားတွေ နဲ့ 
ပြည့်စုံတဲ့ နေ့မျိုး ရောက်လာပါစေ လို့ ပဲ…
လာတော့ လာမယ်တဲ့ ဒါပေမယ့် စောင့်ပါဦးတဲ့
နှစ်အကန့်အသတ်တော့ မပြောတက်သေးဘူး မေပေါင်ရေ …….
ဟုတ်ပနော်…။အဲဒီသြစီတို. u.sကို ukတို့မှာ ဘယ်သူတွေများစိုက်ပျိုရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ကြသလဲမသိဘူးနော်။ အင်တာနက်မှာလည်းသိပ်မတွေ့မိဘူး။ ဗမာပြည်မှာတော့ ကျေးလက်ကလူတွေကလုပ်ကိုင်ကြတယ်။အခုတော့ သူတို့လည်းအပင်ပမ်းမခံ ချင်တော့နိုင်ငံခြားတွေထွက်ကုန်ကြပြီ။
In UK, most of the farmers are very very rich and millionaires. The government wants farmers to grow / breed as much as they can because they want to save money for importing goods outside of UK. So, farmers got special favors from the government such as tax reliefs, subsidies, etc. As long as they do farming, they become more and more rich.
ယူအက်စ်မှာလည်း.. လယ်သမားက သူဌေးကြီးတွေပဲ..။
စက်မှုနိုင်ငံဆိုတော့.. မျက်စိတဆုံးလယ်တွေကို..တယောက်၂ယောက်ပဲ အလုပ်လုပ်နေတာ မြင်ရတယ်..။ မိုးအတုရွာ..။ ပိုးသတ်ဆေးဖြန်း… အသီးအနှံဆွတ်အကုန် စက်တွေနဲ့လုပ်တာကိုး…။
တလောကတင်.. ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဖက်သွားရင်း… ခရမ်းချဉ်သီးစိုက်ခင်းတွေဖြတ်ခဲ့တာ…
၁၀တန်ထရပ်တွေနဲ့.. မျက်စိတဆုံးကားတန်း.. ခရမ်းချဉ်သီးတွေ.. သယ်နေတာ..။ အလုပ်လုပ်နေသူတွေက.. စုစုပေါင်းအယောက် ၂၀မရှိချင်ဘူး..။
ဘာရယ်မဟုတ်.. မင်းထင်ကိုကိုကြီးရဲ့.. အင်းသီး (Floating tomatoes)ကြည့်ရင်း… ကြည်ရင်း နှိုင်းတွေးမိပါရဲ့..။
.. သြော်..ငါတို့ရဲ့ အဖမြန်မာပြည်…။
လိုက်ပြောနေဂျဒယ် ဒါမြန်မာပြည် ဘာမှတ်ဂျသဒုံး
ဒီလိုကျတော့လည်း အင်း ဘယ်လိုမျိုး ပြောမလဲ ပြောရမလဲပေါ့နော်။ ဒီထက် ကွာခြားလို့ အဲဒီကိုရောက်သွားတာမလား။ ဒီတော့ ဒီထက်တော့ နည်းနည်းသာတာပေါ့နော်။ နိုင်ငံခြားဆိုတာကြီးကို မရောက်ဖူးတော့ ငယ်တုန်းကတော့ သွားချင်ခဲ့မိတယ်။ နောက် ဒီဗီပေါက်တော့လည်း သွားရင်ကောင်းမလား မကောင်းလား စဉ်းစားပြီး ကုန်စရာငွေကြေးမရှိလို့ မသွားခဲ့တော့တာခုချိန်တိုင်ပါပဲ။
ကွန်းမန့်တစ်ခုကနေ ဒီပို့ စ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုပေမဲ့… ကွန်းမန့်နဲ့ မတိုက်ဆိုင်တဲ့ အခါတွေများလဲ ပိုစ့်တွေ တင်ပေးနိုင်လျှင်တင်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ် ဦးကြီး FR.. MG မှာစ၀င်ဖတ်ကတည်းက စားရေးတဲ့ပုံစံ(မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်)ဆန်းလို့ သတိပြုခဲ့မိပါတယ်.. နောက်ပိုင်းတော့ ရေးတဲ့ကွန်းမန့်တိုင်းဟာလဲ သူ့ ဟာနဲ့သူ အဓိပါယ်အပြည့်အ၀ရှိတာသတိထားမိလို့တွေ့ တဲ့ကွန်းမန့်တိုင်းဖတ်ဖြစ်ပါတယ်… အခုလည်း စားရေးတဲ့ပုံစံပြောင်းပြီး ပို့စ်တွေပါတွေ့ တွေ့ လာရတော့ အလွန်သဘောကျပါတယ်… နောက်နောင်ရေးမယ့်ပို့်စ်တိုင်းအတွက်လဲ အမာခံပရိတ်သတ်အဖြစ်ရှိနေမည်ဖြစ်ပါကြောင်း.. .ဦးကြီး FR… ကျန်းမာချမ်းသာပါစေခင်ဗျာ…